उत्साहित कविता | के. एल. पीडित | Saugat : Naya Yougbodh
नायिका कविताका लागि दिनहरु बिस्तारै सकारात्मक र उत्साहजनक हुँदै गएका छन् । कला क्षेत्रमा अघि बढ्न अब उनलाई धेरै सजिलो भएको छ । सघाउने हातहरु र प्रेरणा दिने मनहरु बढ्दैछन् । बिस्तारै दर्शकहरुका लागि उनी प्रिय बन्दैछिन् । एकपछि अर्को गर्दै चलचित्रमा अनुबन्धित हुँदै गएकी छिन् । चलचित्र क्षेत्रमा उनको व्यक्तित्व र प्रतिभाको चर्चा शुरु हुन थालेको छ ।
दाङ झिंगौराकी कविता थापा अहिले दाङ भ्यालीमा शिक्षा विषयमा कक्षा ११ मा पढ्दैछिन् । उनी पढाइ र कला यात्रालाई सँगसँगै अगाडि बढाउँदै छिन् । घरपरिवार र कलेजको सहयोग र प्रेरणाले उनलाई निकै उत्साहित बनाएको छ । ‘मलाई घरपरिवार र कलेजको पूर्ण सहयोग छ । त्यसैले मेरो हौसला पनि बढेको छ । कला क्षेत्रमा केही गरेर देखाउँछु ।’ कविताले उत्साहित हुँदै बताइन् ।
चलचित्र इच्छाबाट कविताले कला क्षेत्रमा औपचारिक यात्रा शुरु गरेकी हुन् । यसमा उनले सानो भूमिका निर्वाह गरेकी छिन् । त्यस यता भने उनले दुई चलचित्रमा नायिकाको भूमिका निर्वाह गरेकी हुन् । सूदन थापा निर्देशित यार्साको खोजी र बसन्त घर्तीमगर निर्देशित उहिले बाजेको पालामा उनी नायिका बनेकी छिन् । कला क्षेत्रमा प्रवेश गरेको छोटो समयमा उनले आफूलाई नायिकाको रुपमा उभ्याउन सफल भएकी छिन् ।
उहिले बाजेको पालामा चलचित्रको डबिङ सकाएर कविता भर्खरै काठमाडौंबाट घर फर्केकी छिन् । एकनिष्ठरुपमा कला क्षेत्रमा समर्पित हुँदा र आफ्नो सिर्जनाले मूर्तरुप पाउँदा कवितालाई निकै खुशी र आनन्द अनूभूति हुन्छ । काममा निष्ठापूर्वक समर्पित हुने उनको स्वभाव छ । उनी जति सुन्दर छिन् उत्तिकै विनयशील र सिर्जनशील छिन् ।
एक सफल नायिका बन्ने सपना छ कविताको । उनी यसका लागि कठिन साधना गर्न तयार छिन् । उनलाई आफ्नो क्षमता र प्रतिभामा पूर्ण विश्वास छ । ‘मलाई आफूप्रति पूर्ण विश्वास छ । मनमा आँट पनि छ । गरे के हुन्न र ?’ कविताले बताइन् ।
कला क्षेत्र कविताको सानैदेखिको रुची हो । हजुरआमाको विशेष प्रेरणाले उनलाई यतातिर लाग्न झन् उत्साहित बनायो । शुरुमा बुबा आमाको केही विरोध पनि खप्नुप¥यो उनले । तर अहिले उनलाई सबैको साथ सहयोग मिलेको छ । र यसरी नै निरन्तर कला क्षेत्रमा समर्पित भइरहे उनी एकदिन सफल नायिका बन्ने सुनिश्चित छ ।